Indlela yokuba ngumntu ongcono - Iingcebiso zengqondo esebenzayo | Amadoda aseStylish
Indlela yokuba ngumntu ongcono
UAlicia tomero | 26/11/2021 21:52 | Ukunyamekela, Kufanelekile, ZeMpilo
Ubomi bethu bonke ngumsebenzi oqhubekayo womngeni kunye nokuphucula. Abaninzi bethu baphatha ii-dynamics ze zama ukuba ngabantu abangcono kwaye abanye kufuneka nje baphile kwihlabathi elingakhathalelwanga. Indlela yokuba ngumntu ongcono iya kungena kwizimo zengqondo, intando kunye neemvakalelo zangaphakathi.
Kukho iiresiphi ukuba inokukhokela abantu ngendlela yokuba ngumntu ogqwesileyo. Uninzi lwempumelelo yabantu bagqibele ngokuba yimpumelelo, kodwa kwelinye icala baye basingelwa yindlela yokwenza oko, ekubeni bekwafanele ukuba banyathele baze benzakalise ubani.
1 Indlela yokuba ngumntu ongcono yonke imihla
2 Sebenza ngokubulela kunye nokuzinikela
3 Paka iingxaki kwaye uphile ngoku
5 Musa ukoyika ukwenza oko ucinga ngako
6 Zinakekele kwaye ube nobomi obunempilo.
Indlela yokuba ngumntu ongcono yonke imihla
Into ebalulekileyo yile ngena ngaphakathi kuwe, zama ukuphuma kuloo spiral etyhefa iingcinga zakho kwaye oku kufuneka usebenze kwiinkalo ezininzi. Zama ukuqala ngayo sebenzisa umthetho wesipili, Ukuba kukho into ekukhathazayo ngomntu, mhlawumbi yile nto kufuneka uqale ukuyitshintsha ngawe.
Umbono wokudala Inceda kakhulu ukuba yenziwe ngokucamngca. Imini yonke kufuneka sifumane indawo tsisebenze ngokwethu. Eyona ndlela ilungileyo yokwenza oko kukukhangela elo xesha lincinci yonke imihla kwaye sivale amehlo ethu ukuze sizibonele ngaphakathi. Ayikokucamngca, kodwa inokuba yeyona nto isondeleyo. Ukusuka kweli nqanaba siyakwazi ukubona ingaphakathi lethu kwaye sisebenze kuyo kancinci yonke imihla.
Kutheni uqala apha? Kuba ukuqala ukubona ngeso lengqondo kuya kuba sisiqalo zixabise kwaye uzithande. Ukusuka apha ungasebenza ngcono kakhulu umbulelo.
Sebenza ngokubulela kunye nokuzinikela
Ukuba nombulelo sisimo sengqondo esihle kunye nesixhobo esinamandla kubo bonke abantu. Kusenza sizive silungile, kuba inyaniso yokuxabisa yonke into ejikelezileyo, kungakhathaliseki ukuba incinci kangakanani, iya kuba yindlela efanelekileyo yokuziva umbulelo. Ukongeza, nasiphi na isenzo okanye isenzo umntu asenzayo kuwe, kufuneka sihlale sinjalo uyavuya kwaye akathintelwa. Loo mntu unikele ngexesha lakhe kunye nenjongo yokukwenzela into ethile.
Ngendlela efanayo sithetha ngayo ukuzincama, ukwenza izinto ngaphandle kokulinda ukufumana nayiphi na imbuyekezo. Indlela yokusebenza i-altruism yinxalenye yaloo nxalenye yobumbano ekufuneka ithathwe kumntu ngamnye. Ukugcina le ndlela yokuziphatha kuya kusenza sizive sonwabile kuthi ekuhambeni kwexesha. iya kudala impilo yomzimba kunye nengqondo kunye nokuphila kakuhle.
Paka iingxaki kwaye uphile ngoku
Uninzi lweengxaki ezivelayo ebomini azisishiyi ukuzihambisa ngokuchanekileyo ukuba asizikhuphi entlokweni yethu. Ibhalansi yethu iqala ngaphakathi. Ukuba sihlala sikhumbula izinto zexesha elidluleyo okanye sizingcungcuthekisa ngezinto ezinokwenzeka kwixesha elizayo, ngokwenene sinjalo asiyi kukwazi ukulawula iimvakalelo zethu. Kufuneka sondle intloko yethu ngoku kwaye siyisebenzise ngolawulo olukhulu. (Ukucamngca kusebenza kakuhle kakhulu kula matyala).
Le ngongoma ibalulekile kwaye asithethi ngokuba yinkazana okanye nantoni na enjalo, masingabhidanisi. Kufanele si thandanani ngendlela enothando, enekratshi, ukuze singachatshazelwa kuko nawaphi na amagqabaza anxibelelene nento esiye sanyeliswa ngayo. Ukuba abanye bayakuqaphela ukuba uziva kakubi ngento ongayenzanga kakuhle, oko kuya kubanika amandla kunye Baya kukwenza uthobe ukungcangcazela kwakho. Ukuze ingenzeki loo nto akukho nto ilunge ngaphezu kokuba yinyani nokuba nokuzithemba okukhulu.
Musa ukoyika ukwenza oko ucinga ngako
Ngelixa abantu abaninzi besaphila, bayayiyeka ihambe iminyaka kwaye zihlala zingabonakali kwabanye. Mhlawumbi le asiyondlela oyiyo okanye nawe usenokuba uyaziqhelanisa nayo.
Ungalibazisi ukutsiba loo mqobo, ungene Qhubeka wenze into ongakhange ube nabuganga ukuyenza kwaye ngaphezu kwako konke ukuba ungakuvumeli ufe usaphila. Uya kuziva ubhetele xa unokuba nomfanekiso-ngqondweni wayo yonke into ebibonakala ingenakwenzeka ngaphambili neyathi ekugqibeleni yaba luncedo olukhulu.
Kufuneka ube nethemba kwaye ukwenza oko kufuneka wenze jonga ubomi ngengqondo entle. Eyona ndlela ilungileyo yokwenza oku kukujolisa ingqalelo yakho kwezinye iindidi zeengcinga. Sonke sineengxaki ezithile kwaye ngokuqhelekileyo sijolisa iingcinga zethu kuzo zonke ezo zityholo zibi. Kuya kufuneka utshintshe indlela yakho yokucinga kwaye ugxininise ingqondo yakho kwimibono emihle.
Kutheni kungafanelekanga nje ukunikela ingqalelo kwiingcamango ezingakhiyo? Ngenxa yokuba ekuhambeni kwexesha intloko yakho iya kubanjwa kwinto enobunzima kwaye ngoko iya kugqiba ukuchaphazela impilo yakho yengqondo. Kuya kubangela iingcinga ezimbi, isimo sengqondo esibi kunye nokuziphatha okuzingca.
Zinakekele kwaye ube nobomi obunempilo.
Zinakekele kwaye ube nemikhwa enempilo baya kuba sisindululo esilungileyo sokwenza ingqondo yakho yonwabe. Umntu ozinyamekelayo ngokutya kakuhle aze angaphili ubomi bokungalali uya kukwazi ukumelana noxinzelelo ngcono kakhulu. Oku kuya kukunceda ukuba ungacingi kakubi. Inyaniso yokuba uyayithanda ingqondo yakho kwizinto ezilungileyo iya kukwenza uzolile, ube noxolo kwaye wonwabe. Ngale ndlela kunye nokufezekisa ezi njongo ukuze kulunge kuwe, uya kuba ngumntu olungileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Kufanelekile » ZeMpilo » Indlela yokuba ngumntu ongcono